USuku lweNkcubeko: Ukubhiyozela unxibelelwano | US Taalsentrum
Op 12/06/2017 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas
Ngomhla we-18 kuMeyi, abafundi abaphuma kwamanye amazwe ebezithabatha inxaxheba kwinkqubo yeZiko leeLwimi, i-Intensive English Programme (IEP), babhiyozela uSuku lweNkcubeko ngendlela eyodwa nethabathisekisayo phaya kwiziko iKhaya (Kruiskerk).
IZizwe eziManyeneyo zabhengeza umhla wama-21 kuMeyi, suku olo lubhiyozelwa yonke iminyaka, njengoSuku lweHlabathi loQukaniso lweeNkcubeko ngenjongo yoThethwano noPhuhliso. Olu lusuku olujolise ekuboneleleni ngethuba lokomeleza ukuqonda kwethu ixabiso lale nto kuthiwa kukuqukaniswa kweenkcubeko ezahlukahlukeneyo kananjalo nokufunda indlela yokuphilisana ngemvisiswano. Abafundi beIEP balamkela eli thuba njengethuba lokuvakalisa injongo yolo suku apho eYunivesithi, apho abafundi abaphuma kumazwe asibhozo bathi baphicotha khona iingcingane ngokubanzi ngezo zinto bakholelwayo kuzo, abazixabisileyo neziyinkcubeko yabo. Kwakukho intlaninge yamagunjana emiboniso engenkcubeko yeentlanga ngeentlanga, miboniso leyo yayiqaqambisa amasiko, izithethe nokutya kwazo. Ngaphezu koko, iqela ngalinye labonakalisa indlela elizayamanisa ngayo nenkcubeko yalo.
Kulo nyaka, lo mbhiyozo uzinyaswe nangabafundi bebanga le-10 besikolo semfundo ephakamileyo; isikolo samantombazana, iRhenish. La mantombazana abonakalisa inzondelelo engaphaya kokuqonda kambe ayekhangeleka eyivuyele nale yokunxibelelana nabafundi beIEP. Sifumene iqela leengxelo eziwuncomayo loo mbhiyozo ̶ nazi ezinye izimvo esizifumeneyo:
“USuku lweNkcubeko lunendlela apha emangalisayo yokufunda ngamanye amazwe; ukufunda ngenkcubeko, izithethe nokutya ukutya kwaloo mazwe (eyona nto sayithanda kakhulu ke yileyo!). Olo suku lasivula amehlo kwaye sabanethamsanqa lokuzimasa umcimbi omhle kangakanana”, watsho Caleigh Plaatjes.
UMicalea Budge uthe “Abafundi beBanga leShumi bakonwabela kakhulu ukungcamla ukutya kwamazwe ngamazwe, kutya oko kufana nejeli yohlobo lwaseMzantsi Khoriya, iinudili zaseTshayina netshizi yaseSwislani … Saba nexesha elimnandi, sibalasela kwimidlalwana yooqashi-qhashi, imidaniso nemixhentso kanti nolwazi-gabalala.”
Umcimbi woSuku leNkcubeko yethu wawusisiphumo seeyure ezininzi ezasetyenzwa ngabafundi nootitshala abacebisayo, nto leyo yaba yimpumelelo ngenxa yocwangciso olwalwenziwe ngobuchule nangenxa yeenkqubo zokuziqhelisa ndawonye nokusebenzisana kwabantu abankcubeko zingafaniyo. Iziphumo zoko ke ngoko yaba zezingenambaliso; kwakukho neembasa ezinikwa amaqela amathathu aphume phambili, mbasa ezo zazisekelwe kwiindlela zokukhetha ezizodwa. Imiboniso yokwazisa yona yanika abafundi ithuba elihle lokwazisa abo babezimase lo mcimbi ngendlela abayibona ngayo le nto iyinkcubeko, ewe, ngenene babesazisa bona buqu, kwaye ngokwenza njalo babuphucula nangakumbi ubuchule babo bokusebenzisa isiNgesi.
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Dialogos Jongste nuus Ons taleUSuku lweNkcubeko: Ukubhiyozela unxibelelwano